के मंगल ग्रहमा जीवन सम्भव थियो ? हेरौँ केही तस्विर « प्रशासन
के मंगल ग्रहमा जीवन सम्भव थियो ? हेरौँ केही तस्विर
प्रकाशित मिति :4March, 2021 9:41 am
एजेन्सी । अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले मंगल ग्रहको अनुसन्धानका लागि पठाएको पर्सिभिरेन्स अन्तरिक्ष यानले मंगलग्रमा खिचेका तस्विरहरु सार्वजनिक गरेको छ । रातो ग्रह नामले चिनिने मंगल ग्रहको नासाले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा मंगल ग्रहका विभिन्न तस्विरहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
जेजेरो कार्टरमा कुनै बेला ताल भएको अनुमान गरिएको छ। मंगल ग्रहमा विगतमा जीवन सम्भव थियो कि थिएन भन्ने अध्ययन गर्न नासाले सोही क्षेत्रमा यान पठाएको हो।
पर्सिभिरेन्सले आफूसँग एउटा सानो हेलिकप्टर पनि लिएर गएको छ। आफै चार्ज भएर त्यो हेलिकप्टर मंगल ग्रहमा उड्ने छ। एक ग्रहबाट अर्को ग्रहमा उडाइएको यो पहिलो उडान हुनेछ। यदि उडान सफल भयो भने १.८ किलोग्रामको उक्त हेलिकप्टरले मंगल ग्रहको हवाइ अवलोकन पनि गर्नेछ।
Tags : मंगल ग्रह